पल शाह जोगाउन लाग्नेहरूको भिडलाई रेखा थापा र ऋचा शर्माको सन्देश – Nep Stok
फागुण १८, २०७८ बुधबार 261
एक नाबालिग गायिकालाई कर णी गरेको आरोपमा अभिनेता पल शाह पक्राउ परे । शाहविरुद्ध नवलपरासी र तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पल अहिले हिरासतमा छन् ।
तर, केही कलाकार तथा चलचित्रकर्मी कानुनलाई सघाउनुको साटो पलको बचाउमा उत्रिएका छन् । कलाकार तथा सेलिब्रेटीको एउटा स्टाटस तथा कमेन्टले उनका प्रशंसक तथा शुभचिन्तकसम्म पार्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सं’वेद’नशी’ल मुद्दामा कलाकार संयमित हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ ।
तर उनीहरूको अभिव्यक्ति देख्दा लाग्छ, उनीहरू याे मुद्दामा सं’वेद’नशी’ल छैनन् ।
पल प्रकरणमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर पलप्रति चिन्तित देखिइन् । न कि उनले पीडित नाबालिकाको बारेमा सोचिन् । प्रकरणको बेला पलको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै अभिनेत्री करिश्माले लेखेकी छन्, ‘स्टे स्ट्रङ भाइ । भगवान् तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ र सधैँ सुखी र खुसी रहनू ।’
१८ वर्षभन्दा कम उमेरकासँग सहमतिमै शा’री’रि’क स’म्प’र्क गरे पनि नेपाली कानुनअनुसार त्यो कर णी हो । पलबारे सार्वजनिक अडियोका आधारमा उनले ती बालिकासँग शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध राखेको देखिन्छ । बाँकी प्रहरी अनुसन्धानले नै बताउला ।
तर, यतिबेला रिल लाइफका हिरो पल अभियुक्त बनिरहँदा चलचित्र क्षेत्रकै व्यक्तिहरू उनकाे संरक्षणमा उत्रेका छन् । पल अभिनित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ अहिले नेपालका हलहरूमा प्रदर्शनरत छ । फिल्मका निर्देशक सुदर्शन थापा पललाई सम्झिएर भावुक बनिरहेका छन् । उनले आफ्नो भावुकता फिल्मको व्यापारका लागि पनि प्रयोग गरेका छन् ।
‘प्रिय पल, तिमीले निकै नै मिहिनेत गरेको चलचित्र आज देशभरका सिनेमाघरमा अत्यधिक सफलताका साथ प्रदर्शन भइरहेको छ । तिम्रो सिनेमाको टिम र दर्शकका बीचमा बसेर चलचित्र हेर्ने सपना पक्कै पूरा हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ’, सुदर्शनले लेखेका छन् ।
सुदर्शनको आँखाले पललाई ‘रियल लाइफ’को हिरो नै देखिरहेको छ । जो यतिबेला अभियुक्त नभई कोहीबाट फ’साइ’एका हुन् । उनले थप लेखेका छन्, ‘तिमीले चलचित्रबाट देखेको सपना तिमीलाई माया गर्ने दर्शकहरूले चलचित्र हेरेर मन पराइदिएर पूरा गरिदिनुभएको छ ।
दिन प्रतिदिन दर्शकको साथ दोब्बर हुँदै गएको छ । साथै, तिमीलाई सिनेमाघरमा दर्शकहरूले धेरै नै खोज्दै छन् । हाम्रो टिम र दर्शकहरूको तिमीसँग बसेर सिनेमा हेर्ने सपना छ । छिट्टै सबैको सपना पूरा हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
उनले पलको स्टाटसमा पनि कमेन्ट गर्दै ‘भगवान् तिम्रो साथमा छन्’ भन्दै आश्वासन दिएका थिए ।
अभिनेत्री पूजा शर्मा भने कहिले पलको पक्षमा स्टाटस लेख्छिन् त कहिले दर्शकहरूसामु ‘रोनाधोना’ गर्छिन् । फिल्मको प्रिमियर शोमा पललाई सम्झेर उनी भक्कानो छुटाइरहेकी थिइन् । कहिले उनी पल र आफ्नो स्केच सार्वजनिक गर्दै ‘के यो माया हैन र’ भन्दै हलसम्म दर्शक तान्ने मेलो बुन्छिन्, कहिले ‘म पलको पिल्लर हो, पललाई कसैले केही गर्न सक्दैन’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो अपरिपक्वता छ’ताछु’ल्ल पार्छिन् ।
यसरी कलाकार पल शाहको पक्षमा अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता किसिमका गतिविधि गरिरहँदा पीडित बालिकालाई कस्तो असर पर्छ ? उनीहरूले विचार गरेको देखिन्न ।
रेखा र ऋच्चाको फरक मत
पल प्रकरणमा पलको पक्षमा बोल्नेबाहेक धेरै कलाकार मौन देखिएका छन् । तर, अभिनेत्रीद्वय रेखा थापा र ऋचा शर्माले पी’डि’त बालिकाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अभिनेत्री रेखाले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसमार्फत महिलामाथि कतै नभएको नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्या’प्ने चलन ल’ज्जाज’नक रूपमा नेपालमा व्याप्त भएको भन्दै आ’क्रो’श व्यक्त गरिन् ।
‘२० वर्षमुनिका छोरीहरू बालिका हुन्, बालिका कानुनतः सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । समाजको भूमिका उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने हो । कोसँग लभ छ ? कति पटक यौ’ ‘न स’म्प’र्क भयो ? यस्ता नैतिकतावादी कुराको कानुनलाई मतलब हुनु हुँदैन,’ उनले लेखेकी छन्, ‘समाजको आडम्बर त कुरा गरी साध्य छैन । केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँभरि कतै नभएका नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्या’प्ने चलन ल’ज्जाज’नक रूपमा नेपालमा व्याप्त छ ।’
रेखाको यो आ’क्रो’श पल प्रकरणमा पलको समर्थनमा जागेको भि’डल’क्षित थियो । त्यो भिड, जसले पललाई चोख्याएर नाबालिका गायिकालाई समाजमा दोषी देखाउन लागिपर्‍यो ।
अभिनेत्री ऋचाले पीडित बालिकाको संरक्षण गरेर कानुनको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । ‘मलाई विश्वास छ, नाबालिकाको विश्वासको ह’ ‘त्या ग’र्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको च’रि’त्रह’ ‘त्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले । नाबालिगको संरक्षण, कानुनको सम्मान हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
ऋचाले मुलकी अ’परा’ध सं’हि’ताको कुरा उठाउँदै लेखेकी छन्, ‘…१८ वर्षमुनिकासँग यौ’ ‘न स’म्ब’न्ध राख्नु कर णी हो । कानुनमा कसले, के, कुन अवस्थामा उल्लेख नगरेका कारण नाबालिगको संरक्षणको जिम्मा राज्यको हो । राज्य भनेको हामी पनि त हौ नि, हैन र ? १८ वर्षमुनिकाको सहमतिमै यौ’ ‘न स’म्ब’न्ध भए पनि कर णी ठहरिनुको कानुनी व्यवस्था हुनुको अर्थ निर्णय क्षमतासँग जोडिन्छ नै । अनि नाबालिगको संरक्षणको जिम्मेवारी समाजको पनि भएकाले नै यस्ता कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो । यति बुझौँ, नाबालिगकै करमा पनि कसैले यौ’ ‘न स’म्ब’न्ध राख्यो भने त्यो कर णी हो । उसैले बोलाएको भनेर कानुनले छुट दिन्न ।’
पी’ड’कलाई चोख्याएर पीडितलाई झन् पी’डित बनाउनेहरूको भिडमा दुई अभिनेत्रीको यो अभिव्यक्तिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
Prevपशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।
Nextओहो !जय नारी साबित्रीले पललाई दो षी ठहर्याइन,समिक्षा बारे नबोल्दा यस्तो ल फडा (भिडियो हेर्नुस्)